स्काउटमा राजनीतिकरण | रुपान्तरण
१६ भाद्र २०७६, सोमबार १६:११
कुनैबेला नेपाल स्काउट गौरवशाली संस्था थियो । राजाहरुमा स्काउटका उद्देश्यहरु, खासगरेर देशभक्ति, प्रति खासै मोह थिएन । सर बेडेन पावेलले किन स्काउटको संस्थापना गरेका थिए ? नेपालमा यसका बारे राम्रो जानकारी राख्नेहरु थोरैछन । यसबीच, देशमा युगान्तकारी परिवर्तन भै सकेका छन । यो परिवर्तनपछि स्काउटका आदर्शप्रतिको आकर्षण बढनुपर्ने हो । तर, स्काउटका क्रियाकलापप्रति स्काउटका शुभ–चिन्तक सन्तुष्ट देखिदैनन । स्काउटले उन्नतिगर्न नसक्नुको कारण के हो त ? यसबारे कोही पनि मुख खोल्न चाहँदैन । सूचनाको प्रवाहसंग सबै भयभीत छन । स्काउटका कर्मचारी सबै आफुलाई योग्य ठहराउने, दोषहरुको ढाक छोपगर्ने र सकेसम्म दोषीलाई उम्क्याउने तरिकाले प्रस्तुत हुने बानी छ । सबै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेकाछन ।
स्काउटको केन्द्रिय कार्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम र भावी योजना बारे जानकारी दिने कोही भेटिदैन । कतिपय पदाधिकारीको फोन उठ्दैन । सम्पर्क भएपनि कसैले कुरागर्न खोज्दैन ।
शुरुवात देखि नै नेपाल स्काउट गैर–राजनीतिक संस्थाको रुपमा चिनिएकोछ । युवा तथा बिद्यार्थीहरुमा अनुशासनको निरन्तर अभ्यास गराउने मूल उद्देश्यका साथ संचालन गरिने यो संस्थाको उपयोगिता फैलिएकोछ ।
तर, अहिले नेपाल स्काउटको उपयोग राजनीतिक उद्देश्यका साथ भईरहेको स्पष्ट भएकोछ । पोखरामा सम्पन्न रोभर मूट जसरी संचालित भयो त्यसबाट स्काउट नेतृत्वको कुत्सित उद्देश्य छर्लंग भएकोछ । स्काउटमा हाल चलेका राजनीतिक गतिबिधि बारे सल्लाहकारहरु अनभिज्ञ रहेको बताउँछन । उनीहरुलाई संस्थामा के भईरहेको छ ? त्यसको खासै पत्तो छैन । स्काउट सम्बन्धि प्रश्न धेरै छन ।
बर्तमान सरकारव्दारा भइरहेको स्काउटको राजनीतिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि ध्यान दिएको देखिदैन । प्रतिपक्षका छायाँ मन्त्रीलाई स्काउटको महत्व थाह नभएर हो कि किन हो, यस सम्बन्धी प्रश्न उठाएका छैनन ।
आफुलाई स्काउट र शुभचिन्तक भन्न चाहने गुणराज प्याकुरेल स्काउटको गतिबिधि प्रति पुरै असन्तुष्ट छन । सरकारमा जसको बोलबाला छ उनैको हाली–मुहाली छ । स्काउटका गतिबिधि स्काउटको मूल्यमान्यता अनुरुप संचालित नहुदा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ स्काउटमा जसको शक्ति उसको भक्ति चलिरहेको छ । सरोकारवाला तथा सल्लाहकार समिति तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन ।
नेपाल स्काउटका केन्द्रीय समितिका पूर्व चीफ कोअर्डिनेटर तथा हालका सल्लाहकार रबिन दाहाल पनि स्काउटका काम कारबाही प्रति अनभिज्ञ जस्तै छन । स्काउटमा किन राजनीति मौलाउन थालेकोछ ? नेपाल स्काउटको इतिहासमा नै पहिलो चोटी भएको रोवर मुट कार्यक्रम आफैमा किन विवादित बन्यो ? जहिले पनि आर्थिक अनियमितताका कुरा उठी रहन्छन तर निश्चित निस्कर्षमा नपुगी सेलाउछन, किन ? यस्ता प्रश्नको ठेट जवाफ उनीसंग पनि छैन ।
केन्द्रीय समितिका पूर्व चिफ कोअर्डिनेटर र हालका सल्लाहकार भएकाले पनि दाहाल एकहदसम्म जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, उनी भन्छन कतिपय निर्णयहरुको बारेमा हामीलाई थाहा नै हुदैन । निर्णय पछि मात्रै जानकारी आउने गर्दछ । समितिले निश्चित बिषयमा सल्लाहकार समितिको प्रतिक्रिया मागेको खण्डमा सल्लाह दिने हो । कतिपय महत्वपूर्ण बिषयमा केन्द्रिय समिति एक्लैले निर्णयगर्ने गर्दछ ।
सल्लाहकार समितिको आधिकारिक बैठक केन्द्रीय समिति गठन हुने बेला बसेको हो । त्यसपछि नत बैठक बसेको छ न त कुनै निर्णयमा सल्लाहकारको सुझाव र सल्लाह नै मागिएको छ । स्काउटको पूर्व सल्लाहकार समिति संयोजक तथा हाल सल्लाहकार सदस्य रामबदन जोशी स्काउटको कार्यविधिप्रति सन्तुष्ट नभएको बताउछिन । उनका अनुसार, स्काउट पहिले निकै मर्यादित थियो । अहिले बाटो बिराउन लागेको हो कि जस्तो भएको छ । सल्लाहकार समिति केवल नाम मात्रैको समिति भएको छ । स्काउटमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोछ ।
रामवदन भन्छिन, स्काउट भनेको निस्वार्थ सेवा गर्नको लागि गठित सस्था हो । नेपाल स्काउटको बिधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ, स्काउट कुनै पनि राजनीतिक आचरणबाट प्रेरित हुने छैन , संरक्षक प्रधानमन्त्री भएपनि यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुदैन ।
धेरै जसो सल्लाहकार स्काउटमा आफ्नो अस्तित्व नरहेको महसुस गरिरहेका छन । यसको मुख्य कारण स्काउट केन्द्रिय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयमा सल्लाहकारको सहभागिता खोजिदैन । आखिर किन निर्णयमा सहभागी गराईंदैन सल्लाहकार समितिका सदस्यलाई ? स्काउटका लागि यो गम्भीर प्रश्न हो । सल्लाहकारको उचित मूल्यांकन नै हुदैन भने आखिर के का लागि गठन गरिएको हो सल्लाहकार समिति ? सल्लाहाकार समिति प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्रै हो त ?
राज्य संरचना परिवर्तन भए संगै स्काउटको पनि उचित र सान्दर्भिक संरचना निर्माण गरि सामाजिक सेवामा परिचालित गरिनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री आफै संरक्षक रहेको सस्थाले अहिलेसम्म परिषदको बैठक गर्न सकेको छैन ।
प्रश्नैप्रश्नमा रुमल्लिएको स्काउट सान्दर्भिक उत्तर र नतिजाको प्रतीक्षामा छ । प्रतीक्षा कहिले सकिने हो ? कसैलाई थाह छैन ।